June 2019 – " कञ्चनजंगा News "
धर्ती माता’ बताउने महिलाविरुद्ध अभद्र व्यवहारको कसुरसम्बन्धी मुद्दामा म्याद थप
No Comments on धर्ती माता’ बताउने महिलाविरुद्ध अभद्र व्यवहारको कसुरसम्बन्धी मुद्दामा म्याद थप
काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुले ‘धर्ती माता’ बताउने महिलाविरुद्ध अभद्र व्यवहारको कसुरसम्बन्धी मुद्दामा म्याद थप गरेको छ
परिसरका डीएसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार, कुँवरमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले ७ दिनको म्याद दिएको छ ।
उनले असार पहिलो साता नेपाली सेनाको जंगी अड्डासँगै जोडिएको भद्रकाली मन्दिरमा धर्ती माता बताउँदै युवतीलाई यातना दिएकी थिइन् ।
सामाजिक सञ्जालमा उनले गालीगलौज गर्दै कुटपिट गरेको भिडियो भाइरल भएपछि प्रहरी प्रशासनले चासो देखाएको थियो ।
ब्राह्मण समुदायमा जन्मिएका सञ्जय बन्जराले मुश्लिम युवतीसंग बिहे गरे (भिडियो सहित)
No Comments on ब्राह्मण समुदायमा जन्मिएका सञ्जय बन्जराले मुश्लिम युवतीसंग बिहे गरे (भिडियो सहित)
काठमाडौं, १४ असार । बिराटनगरमा ब्राह्मण समुदायमा जन्मिएका सञ्जय बन्जराले मुश्लिम युवतीसंग बिहे गरेका छन् ।
हिन्दु धर्मावलम्बीको घरमा जन्म भएर पालनपोषण, पढाई लेखाई सबै हिन्दु धर्ममै भयो । पछि भबिष्य खोज्दै उनि काठमाडौं आए र ठमेलमा ब्यबसाय गरेर बसे ।
त्यही क्रममा नुवाकोटको त्रिशुलीमा हुर्किएकी मेहरिन बानुलाई भेटे । मेहरिनसँगको भेटपछि उनले पनि मुश्लिम धर्म मान्न थाले । अन्ततः मेहरिनसंग संजयले बिहे गरे । अहिले उनी पुर्णरुपमा मुस्लिम भएका छन् ।
उनको पहिचान फेरिएको छैन तर उनको समाज सस्कृति सबै फेरिएको छ । उनी यसैमा खुसी छन् ।
हिन्दु धर्ममा जातीय विभेद हुँदा संजयलाई मन दुख्थ्यो, आखिर सबै मानिस न हो किन यस्तो भेदभाव भएको होला भन्ने उनलाई लाग्थ्यो ।
तर इश्लाम धर्ममा यस्तो हुँदैनथ्यो सबैलाई समान ब्यबहार गरिन्छ संजयलाई यहिँ कुराले पनि मुश्लिम धर्म अंगाल्न प्रेरित गरेको थियो । उनै उदाहरणीय जोडी संजय र मेहरिनसँग नेपाल चित्रले गरेको कुराकानी हेर्नुहोस्:
प्रचण्ड-नारायणहिटीमा उभिएर दरबार हत्याकाण्डको यथार्थ पत्ता लगाइछाड्छौं भनेको तर, ‘आखिर के ले दिँदैन ?
No Comments on प्रचण्ड-नारायणहिटीमा उभिएर दरबार हत्याकाण्डको यथार्थ पत्ता लगाइछाड्छौं भनेको तर, ‘आखिर के ले दिँदैन ?
१४ असार, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको नेतृत्वको छाला जोगाउनतिर लागेको त होइन भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
मदन भण्डारी स्मृति दिवसको अवसरमा प्रचण्डले मदन भण्डारी हत्याकाण्ड, दरबार हत्याकाण्ड जस्ता ठूला घटनाको कारण पत्ता लगाउन नसकिएको बताए ।
आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि नारायणहिटीमा उभिएर दरबार हत्याकाण्डको यथार्थ पत्ता लगाइछाड्छौं भनेको तर, अहिलेसम्म नसकिएको भन्दै उनले भने, ‘आखिर के ले दिँदैन ? जनताले नदिएको पक्कै होइन । सरकारमा हामी नै छौं तर, यस्तै भएको हो भन्नसक्ने ठाउँमा पनि छैनौं ।’
भोली फेरी यो योजना चाहियो भनेर नआउनुहोला, मेयरको यो अभिब्यक्ति पछी वडा अध्यक्षहरु थप जंगिए (भिडियो हेर्नुहोस)
No Comments on भोली फेरी यो योजना चाहियो भनेर नआउनुहोला, मेयरको यो अभिब्यक्ति पछी वडा अध्यक्षहरु थप जंगिए (भिडियो हेर्नुहोस)
पोखरा । पोखरा महानगरको नगरसभा चलिरहदा कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका वडा अध्यक्षहरुले बजेट पुस्तीका च्यातिदिए ।
एकजना वडा अध्यक्ष त कुर्चि टेबुल तोडफोडमै उत्रिए । मेयरले काग्रेसका वडा अध्यक्ष भएका वडामा थोरै बजेट दिएर राजनितिक पुर्वाग्रह साधेको उनीहरुको तर्क छ । महानगरका मेयर मान बहादुर जिसी नेकपा बाट बिजयी हुन ।
नगरसभाको भोलीपल्ट काग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीले महानगरको मुल गेटमा ताला नै लगाए ।
मेयरले नगरसभामा काग्रेसका वडाअध्यक्ष लाई लक्षित गरी एउटा बाक्य बोलेका थिए – ‘भोली फेरी यो योजना चाहियो भनेर नआउनुहोला ।’
मेयरको यो अभिब्यक्ति पछी वडा अध्यक्षहरु थप जंगिए । के हो बास्तबिकता ? वडा अध्यक्ष कसरी तोडफोडमा उत्रिए ? बजेट बिबाद के हो ? मेयरको जवाफ के छ ? गण्डकी टेलिभिजनको कार्यक्रम गण्डकी छड्केले यिनै प्रश्नहरुको जवाफ खोजेको छ । कृपया तलको पुरा भिडियो हेर्नुहोस
धर्ती माता भनिने (विष्णु कुवँर) पक्राउ
No Comments on धर्ती माता भनिने (विष्णु कुवँर) पक्राउ
काठमाडौँ — आफूलाई धर्ती माता बताउँदै भद्रकाली मन्दिर परिसरमा एक युवतीलाई कुटपिट गर्दै यातना दिने विष्णु कुँवरलाई प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेको छ ।
बुटवल बस्ने कुवरले आफूलाई तन्त्रमन्त्रको ज्ञान भएको दाबी गर्दै केही समय अघि भद्रकाली मन्दिरमा युवतीलाई यातना दिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए पछि प्रहरीले उनको खोजी गरेको थियो।
उनलाई शुक्रबार बालाजु क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो।
गत वर्ष मंसिर ११ मा उनले बुटवल ११ का विष्णु थापा र उनकी आमा झविमाया शिरिषमाथि धारिलो हतियार प्रयोग गरेकी थिइन्। उक्त घटना प्रहरी कहाँ पुगे पनि माताको दाबावमा पीडितहरुलेउजुरी फिर्ता लिएका थिए।
काठमाडौं- रेडियो कार्यक्रमको प्रस्तोताबाट मिडिया यात्रा सुरु गरेका शिशिर भण्डारीले त्यसपछि टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता, कलाकार, स्टेज कार्यक्रम सँचालक, स्ट्याण्ड अप कमेडियन, गायक, कलाकार हुँदै युटुबरसम्मको चिनारी बनाए ।
हाल यतिबेला उनी युटुब मार्फत् नै समाज सेवा गर्ने सामाजिक अभियन्ताका रुपमा चिरपरिचित भएका छन् ।
दुख तथा सँकटमा रहेका व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्न सधैं तत्पर रहने शिशिरले थुप्रै सामाजिक कामहरुलाई पुर्णता दिएका छन् । उनलाई सबैले गरिब, दुखीको हिरो भनेर पनि चिन्दछन् ।
बाटोमा सारँगी बजाउने बालक जनक गन्धर्वलाई स्कुल पढाउने, करेन्टले हात खुट्टा गुमाएका कृष्ण वलिलाई करोडौं सहयोग उठाएर कृत्रिम हात खुट्टा हाल्न योग्य बनाउने देखि लिएर अन्य धेरै सामाजिक कामहरु शिशिर भण्डारीले गरेका छन् ।
देश तथा विदेशना छरिएर रहेका सम्पुर्ण नेपाली र नेपाली भाषीको साथ पाएका शिशिरले यतिबेला चितवनका २२ बर्षे बिनोद रानाभाटको दर्दनाक पिडालाई दर्शक माँझ ल्याएका छन् ।
कतारमा भारतीयलाई मारेको झुटो आरोपमा ३० महिनादेखि जेलमा रहेका बिनोदलाई ८२ लाख नेपाली रुपैंया तिरेर नेपाल फर्काउने अभियानमा शिशिर लागि परेका छन् । त्यसका लागि उनले सरकार र सबै नेपालीलाई अनुरोध गरेका छन् । भिडियो हेर्नुसः
छोरालाई बचाउने क्रममा बुबाको जीपले थिच्येर मृतु
No Comments on छोरालाई बचाउने क्रममा बुबाको जीपले थिच्येर मृतु
दाङ १४ असार / जिप दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ। दंगीशरणबाट तुलसीपुर आउँदै गरेको रा१ज ४३६ नम्बरको जिप दंगीशरण-७ श्रीगाउँनजिक शनिबार बिहान साढे ८ बजेतिर दुर्घटना भएको हो।
दर्घटनामा जिप चालक सोही ठाउँका २९ वर्षीय डिल्ली बहादुर ओलीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ। उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो।
जिप अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा गम्भीर घाइते भएका ओलीको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रेमबहादुर शाहीले बताए।
जीपमा चार जना मात्रै रहेको र सबै परिवारका सदस्य रहेको खुल्न आएको छ। अन्य तीनजनाको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका अनुसार चालक ओली आफ्नो छोरालाई बचाउने क्रममा जीप मुनी च्यापिएका हुन्। उनले छोरालाई बचाउन जीपबाट हाम फल्ने क्रममा जीप मुनी च्यापिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो।
३० वर्षपछि फरार अभियुक्त पक्राउ
No Comments on ३० वर्षपछि फरार अभियुक्त पक्राउ
गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत लमजुङको दूधपोखरीबाट ३० वर्षपछि फरार अभियुक्त भ्यान्टे कामीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरी निरीक्षक वसन्त पाण्डेको नेतृत्वमा सादा पोशाकमा गएको प्रहरी टोलीले दूधपोखरी गाउँपालिका–४ घर भएका उनलाई सोही क्षेत्रबाट शुक्रबार साँझ प्रक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
तत्कालीन इलामपोखरी गाविस–५ र हाल उक्त गाउँपालिका–४ बस्ने कामीलाई जिल्ला अदालतबाट २०४८ माघ १३ गते जन्मकैदको फैसला भई सर्वोच्च अदालतले समेत सोही फैसला सदर गरेको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ गरेका कामीलाई आइतबार अदालतमा लगेर केही प्रक्रिया मिलाएर जिल्ला कारागार लगिने प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्रमान गुुरुङले बताए ।
तत्कालीन इलामपोखरी गाविसको लाङ्दी दोभान त्रिवेणीमा गोरखा खरिबोटका बेदप्रसाद पोख्रेललाई धेरै पैसा ल्याएको आशङ्कामा कामी लगायतको पाँच जनाको टोलीले ढुङ्गाले हानेर कर्तव्य गरी मारेको थियो ।
उनको साथबाट नगद रु चार हजार लुटी पाँच जनाले बाँडीचुडी लिएका थिए । मृतकका दाजु कृष्णप्रसाद पोख्रेलले कामीसहित पाँचजना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा २०४८ असोज १८ गते मुद्दा दिएका थिए । सोही समूहमा रहेका एक जनाले सजाय भोगिसकेका छन् भने बाँकी अझै तीनजना फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
अमेरिकाबाट डाक्टर पढेर आफ्नो घर खरिबोट गोरखा फर्कदै गर्दा साँझको समयमा इलमपोखरी गाविसको मुगे बजारबाट पिछा गर्दै लाङ्दी र चेपे खोलाको संगमस्थल दोभानमा पाखरेललाई उनीहरुले भीभत्स ढंगले हत्या गरेका थिए । राम्रोसँग नेपाली बोल्न पनि नजान्ने उनको हत्या भएपछि त्यो हत्याकाण्ड लमजुङको बिचौर क्षेत्रमा चर्चित बनेको थियो । रासस
काठमाडौंमा तत्कालै ‘रात्री बस सेवा’ सञ्चालनमा नआउने
No Comments on काठमाडौंमा तत्कालै ‘रात्री बस सेवा’ सञ्चालनमा नआउने
१४ असार, काठमाडौं । काठमाडौंमा तत्कालै ‘रात्री बस सेवा’ सञ्चालनमा नआउने भएको छ । व्यवसायीको विरोधका कारण तत्कालै यात्रु बस सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था आएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
विभागले गत असार १ गतेदेखि रात्री बस सेवा सुरु गर्न सबै तयारी सकाएको थियो । तयसअनुसार रुट र भाडादर समेत तोकिएको थियो । तर, सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने निर्णय रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएपछि योसँगै रात्री बस चलाउनेसहित मालबाहक सवारीलाई काठमाडौं उपत्याका दिउँसो प्रवेश नदिने निर्णय पनि एकैसाथ स्थगित भएको थियो ।
सरकारी अधिकारीहरुले भने रात्री बस सेवा सुरु नहुनुको दोष व्यवसायीहरुमाथि लगाएको छ । यातायात विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल व्यवसायीहरुले असहयोग गरेका कारण तत्काल रात्रीबस चलाउन नसकिने अवस्था आएको बताए । ‘रात्री बस चलाउँदा व्यासायीहरु आर्थिक रुपमा डुब्नु हुन्छ भन्ने कुरा आयो । हामीलाई कतार जाने अवस्था नबनाइदिनुस् भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘यसकौ कारण हामीले अहिले रात्री बस चलाउन सकेनौं ।’
विभागले जेठ ३२ मा सूचना निकालेर १२ वटा कम्पनीलाई १८ रुटमा रात्री बस चलाउन अनुमति दिइएको थियो भने न्युनतम् भाडा २५ रुपैयाँ तोकिएको थियो । साझा, महानगर, रिद्धि सिद्धि, शुभकामना, रचना, मयुर, अन्नपूर्ण, गोकर्णेश्वर र ललितपुर मिनिबस यतायात प्रालिले फरक-फरक रुटमा अनुमति पाएका थिए ।
तर अब यो योजना अनिश्चित भएको छ । ‘विभाग फेरि पनि बस चलाउने वातावरण बनाउन प्रयत्नरत छ,’ दाहालले भने, ‘सबै पक्षको सहयोग मिल्यो भने सम्भव छ ।’
यातायात व्यवसायीहरु भने सरकारले तोक्न खोजेको न्युनतम् २५ रुपैयाँ भाडादरमा बस चलाउन नसकिने बताउँछन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासंघका महासचिव सरोज सिटौला वैज्ञानिक किसिमको भाडा तय भए रात्री बस सेवा सुरु गर्न सकिने बताउँछन् । ‘कोटेश्वरमा ७ जना यात्रु भेटेको बस महाराजगञ्ज पुग्नुपर्‍यो भने प्रस्तावित भाडादरमा कसरी सम्भव हुन्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘राति भौतिकसहित आर्थिक जोखिम लिएर सेवा दिनुपर्छ । त्यसलाई सम्बोधन गरियो भने रात्री बस चल्न सक्छ ।’
काठमाडौंमा अधिकांश रुटमा रातको ८ बजेपछि गाडी पाउन मुस्किल पर्छ । बस छुट्दा चर्को भाडा तिरेर ट्याक्सीमा जानु वा हिडेर जानुको विकल्प छैन । व्यवसायीहरु साविकको भन्दा बढी भाडा लिएर राति १२ बजेसम्म बस चलाउन सहमत पनि थिए तर, सरकार एकाएक आˆनो निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।
काठमाडौंमा रात्री बस चलाउने योजना असफल भएको यो पहिलो घटना भने होइन ।
केही समयअघि साझा बसले राति ९ बजे सम्म सेवा दिन सुरु गरेको थियो तर आर्थिक रुपमा फलदायी नभएको भन्दै स्थगन गर्‍यो । यसअघि रात्री बस सेवा पनि सञ्चालन गरिएको थियो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’को पहलमा ०६९ को भदौमा रात्रीकालिन बस सेवा प्रारम्भ भएको थियो ।
त्यसबेला राति ३ घण्टा गाडी गुडाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले यातायात समितिहरुलाई ४५ लाख दिएको थियो । ६ महिनाका लागि १४ वटा बस अनुदान दिएरै चलाइएको थियो । विभिन्न रुटहरु तोकेर बस चलाइए पनि व्यवसायीले अनुदान लिएर केही समयपछि यात्रु नपाएको भन्दै सेवा बन्द गरेका थिए ।
फेसबुकमार्फत चिनजान भएर विवाह गर्छु भन्दै शारीरिक सम्पर्क राखेर एक किशोरीलाई गर्भवती बनाएर छाड्ने युवक पक्राउ
No Comments on फेसबुकमार्फत चिनजान भएर विवाह गर्छु भन्दै शारीरिक सम्पर्क राखेर एक किशोरीलाई गर्भवती बनाएर छाड्ने युवक पक्राउ
ललितपुर । फेसबुकमार्फत चिनजान भएर विवाह गर्छु भन्दै शारीरिक सम्पर्क राखेर एक किशोरीलाई गर्भवती बनाएर छाड्ने युवक पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा धादिङ घर भएका विजय तामाङ रहेका छन् । ०७५ मंसिर ७ गते तामाङले १७ वर्षीया किशोरी (नाम परिवर्तन) आरलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर कोठामा लगी जबरजस्ती करणी गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुल्न आएको महानगरीय प्रहरी वृत्त सातादोबाटका प्रमुख गौतम मिश्रले जानकारी दिए ।
आरलाई शारीरिक सम्बन्ध राख्न लगाएर लगत्तै फरार भएका तामाङलाई सातदोबाटो प्रहरीले लुकिछिपी बसेको अवस्थामा गोदावरी नगरपालिका–४ ठैबुबाट पक्राउ गरिएको डीएसपी मिश्रले बताए ।
तामाङले यसअघि पनि एक युवतीलाई विवाह गर्छु भनेर शारीरिक सम्बन्ध राखेर फरार भएको अनुसन्धानमा खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
हालैपनि कोठामा एक युवतीलाई विवाह गर्छु भन्दै तामाङले ल्याएर राखेको पाइएको छ ।
पक्राउ परेका तामाङलाई जिल्ला अदालत ललितपुरबाट ६ दिनको म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली-नेपालले कसैबाट हेपिएको महसुस गर्नु नपरोस् भन्दै उनले नेपालले पनि कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगर्ने
No Comments on प्रधानमन्त्री ओली-नेपालले कसैबाट हेपिएको महसुस गर्नु नपरोस् भन्दै उनले नेपालले पनि कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगर्ने
१४ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै राजनीतिक दलहरुको परराष्ट्र नीति एउटै हुनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपालको पराराष्ट्र नीतिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार पहिलो पटक आयोजना गरेको राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा सिंगो देश एक हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
ओलीले भने, ‘परराष्ट्र नीतिमा सिंगो देश एक हुनुपर्छ । एउटै भाषा बोल्नुपर्छ । सरकारले एकलौटी काम गर्दैन ।’
नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सबैले चासोपूर्वक हेरिरहेको बताउँदै ओलीले छिमेकीसहित सबै राष्ट्रलाई हेर्ने नीति एउटै हुनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग बेला-बेलामा भइरहने खटपट अन्त्यको प्रयास भइरहेको जानकारी पनि दिए । नेपालले कसैबाट हेपिएको महसुस गर्नु नपरोस् भन्दै उनले नेपालले पनि कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगर्ने बताए ।
नेपालको अहिलेको आवश्यकता लगानी हो भन्दै उनले त्यहीअनुरुपको परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको बताए ।